Vanhu: Chii Khloe Kardashian anofunga nezvebhuku raRamar Odom - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Vanhu: Khloe Kardashian pfungwa dzeRamar Odom bhuku idzva
Wanda Peeps, Lamar Odom achasunungura 28 inotevera May nyaya yemhuka iyo inofanidza kuyeuka kweupenyu hwake huchishandiswa naKhloe Kardashian uye inobata nekudhakwa kwake. Asi mudzimai wake wekare akafunga nezvekupikira kwake uye chokwadi chokuti iye pakupedzisira akasarudza kuchinja peji yacho munhoroondo yavo? Wanda Team inokuudza zvose!
Munguva ichangopfuura, takakudzidzisa izvozvo Lamar Odom, murume wekare waKhloe Kardashian, akanga aita bhuku kuti aone mumazuva anouya aakanyura nawo Wandayantes zvinyorwa zvine chokuita nekuvimba kwake pabonde.
Rima KuChiedza naRamar Odom
Kana chiyeuchidzo chekare chebhasikiti nyeredzi chaicho chaicho chinotarisirwa kuchenesa zvakapfuura uye kutanga chitsauko chitsva muupenyu hwake, mudzimai wake wekare Khloe Kardashian anonzwa akavimbiswa uye anomupa zvose zvikomborero zvake, maererano nehutano hwakataurwa neAmerica paWorld Life.
Zvechokwadi, pasinei nematambudziko akare ekare
vakaroorana, chaiye nyota yeTV inofara kune waimbova mutambi we Lakers. TO
Munyaya iyi, chinyorwa chiri pedyo neKhloe chakataura chete muHollywood Life:
« Khloe anofara nokuda kweRamar uye
unomukumbira kubudirira kwose munyika muno nebhuku rake idzva ".
Izvo zvinoratidzika zvisingave pachena kuti nyenyeri inoramba ichinge yakavhiringidza manzwiro nekuda kwekare yakaoma kare neRamar. Yeuka kuti akamurambana munaDisemba 2016, mushure memazana e7 emuchato:
zvakaoma kuti Khloe arege kunzwa achishungurudzwa nokuti iye
angadai akada kunge asina kutarisana nematambudziko anotaurwa mubhuku rake. mu
panguva imwe chete, haazive kana Lamar angadai akadzidza zvidzidzo zvakafanana uye aizonzwa
kumusoro nhasi kana zvange zvisati zvaitika. Khloe anozvikudza zvikuru pamusoro pake
kufambira mberi kwakaitwa uye zvose zvakashanduka mumakore achangopfuura, kunyanya
nekuda kwevana vake...
Apo Khloe anofunga nezveRamar uye nguva yaanogara naye, zvinorwadza zvikuru. Akanga achinyengera mukuda naye uye akaparadzwa apo iye ava kuda kufanokuti iye ane rudo rusingaverengeki kuna Lamar uye anoda kuti amuone achibudirira. Haana kugadzirira kwenguva, asi iye asvika padanho raanofunga kuti anogona pakupedzisira ave neshamwari uye ave shamwari naRamar zvakare. ".
Uye iyo inogumisa ichiti: " Khloe anoda kuva nechokwadi chokuti haatauri zvinhu izvi kuti atengese mabhuku, nokuti atove apiswa naye kakawanda. Saka, kana mhirizhonga inopikisana nekudhindwa kwebhuku rake yaburuka, angangotarisa musangano mukamera kuviga chikwata. Kusvikira panguva iyo, zvichange zvakaoma kwaari kuti aite manzwiro aya ".
Zvisina kukodzera, Khloe ndeyeiye mukadzi wemwoyo Wanda Vanhu. Tinogona kungorivhura chete. Ngatitarisirei kuti naRamar, iye achakwanisa kubvumirana zvakare mamwe mazuva ano. Vakanga vakanyanyisa panguva iyoyo ...
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.jewanda-magazine.com/2019/05/people-ce-que-pense-khloe-kardashian-du-nouveau-livre-de-lamar-odom/